Nhau dzeBhaibheri: Upenyu Hwakaoma Hunovamba - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Kunze kwebindu reEdheni, Adhama naEvha vakava nezvinetso zvizhinji. Vaitofanira kushandira zvokudya zvavo nesimba. Panzvimbo pemiti yakanaka yemichero, vaiona minzwa mizhinji noutumbambeva zvichimera pose pose. Ndozvakaitika apo Adhama naEvha vasina kuterera Mwari uye vakarega kuva shamwari Dzake.
Asika chakaipisisa pane ichecho, Adhama naEvha vakatanga kufa. Yeuka, Mwari akavanyevera kuti vaizofa kana vakadya muchero womumwe muti. Eya, muzuvaro ravakadya vakavamba kufa. Aiwa vaiva vakapusa sei kusaterera Mwari!
Vana vose vaAdhama naEvha vakaberekwa Mwari abudisa vabereki vavo mubindu reEdheni. Ikoku kunoreva kuti vana vaizokwegurawo ndokufa.
Kudai Adhama naEvha vakanga vaterera Jehovha, upenyu hwaizodai hwakave huchifadza kwavari navana vavo. Vangadai vose vakararama nokusingaperi mumufarwa pasi pano. Hapana munhu angadai aitofanira kukwegura, kurwara ndokufa.
Mwari anoda kuti vanhu vararame nokusingaperi mumufarwa, uye Anopikira kuti rimwe zuva vachadaro. Handi pasi rose bedzi richava rakatsvinda, asi vanhu vose vachava vakagwinya. Uye ani naani pasi pano achava shamwari yakanaka nani naani uye naMwari.
Asika Evha akanga asichiri shamwari yaMwari. Nokudaro paakabereka vana vake, kwaimuomera. Aiva namarwadzo. Kusaterera Jehovha kwakamuunzira chaizvo rusuruvaro rukuru, haubvumi here?
Adhama naEvha vaiva navanakomana navanasikana vazhinji. Apo dangwe ravo rakaberekwa, vakamutumidza kuti Kaini. Vakatumidza mwanakomana wavo wepiri kuti Abheri. Chii chakaitika kwavari? Unoziva here?
Genesi 3:16-23; 4:1, 2; Zvakazarurwa 21:3, 4.
Upenyu hwakanga hwakaita sei kuna Adhama naEvha kunze kwebindu reEdheni?
Chii chakatanga kuitika kuna Adhama naEvha, uye nei?
Nei vana vaAdhama naEvha vaizokwegura vofa?
Kudai Adhama naEvha vakanga vateerera Jehovha, upenyu hwaizodai hwakamira sei kwavari nevana vavo?
Kusateerera kwaEvha kwakamurwadzisa sei?
Vanakomana vaviri vokutanga vaAdhama naEvha vainzi vanaani?
Vamwe vana vari mumufananidzo ndivanaani?
Verenga Genesi 3:16-23 uye 4:1,2.
Upenyu hwaAdhama hwakavhiringidzwa sei nokutukwa kwakaitwa pasi? (Gen. 3:17-19; VaR. 8:20, 22)
Nei zita rokuti Evha, iro rinoreva “Mupenyu,” rakanga rakakodzera? (Gen. 3:20)
Jehovha akaratidza sei kuti akanga achiri kuda Adhama naEvha kunyange pashure pokunge vatadza? (Gen. 3:7, 21)
Verenga Zvakazarurwa 21:3, 4.
Ndezvipi ‘zvinhu zvekare’ zvaunotarisira kuona zvichibviswa?